Laga yaabaa 11, 2018 admin
Bank of Canada si ay u isticmaalaan blockchain for dhakhso gelida securities
dambayn “Project Jasper” tijaabooyin blockchain ayaa muujiyay in ledgerada qaybiyey waa wax ku ool ah at automating degsiimooyinka securities-waqtiga dhabta ah, sida laga soo xigtay Bank of Canada iyo laba-hawlgalayaasha on the “securities isku dhafan iyo dejinta bixinta” mashruuca.
Gerry Gaetz, Madaxweynaha iyo CEO of Payments Kanada, sida laga soo xigtay:
“Tani waxay muujinaysaa in ay suurogal tahay in samatabbixin lacagaha hab taas oo aan marnaba la sameeyo ka hor – by si toos ah nayo lacag caddaan ah ka iibsada si gada, taasoo keentay in degsiimooyinka deg dega ah.”
Upbit sarrifka Korean weeraray by xeer-
Xeer ee South Korea ayaa lagu soo waramayaa weeraray sarrifka ugu weyn cryptocurrency dalka, UPbit. Baarayaasha ka xeer-ka’ xafiiska of Seoul baadhay xafiiska madaxa is-dhaafsiga on May 10.
UPbit lagu tuhunsan yahay musuqmaasuq lagu eedeeyay iibinta cryptocurrency macaamiisha in uusan dhab ahaantii qaban, sida lagu sheegay warbixinta.
xeer The’ xafiiska sheegay: “Waxaan ku xaqiijisatay saxannada adag iyo buugaagta xisaabaadka iyada oo lala wareego. Falanqaynta ayaa la filayaa in ay qaataan maalmood.”
Huawei waxaa ka mid ah Seeraar app jeebka dukaanka ay app
Users telefoonada Huawei awoodaan in ay soo bixi boorsada Seeraar on qalabka ay markii ugu horeysay laga bilaabo Jimcaha noqon doonaa.
Huawei, dukaamada G-weyn ee saddexaad ee adduunka ee, waxaa sii daayo BTC.com ee jeebka Seeraar in ay AppGallery, Sida ay Alejandro de la Torre, Madaxweyne ku xigeenka BTC.com ee hawlaha ganacsiga.
Waxa uu sheegay in AppGallery la pre-rakibi doonaa on dhammaan taleefanada cusub Huawei.
Tallaabadan ayaa u badan tahay waxay yeelan doonaan saameynta ugu badan ee suuqa Chinese, halkaas oo Huawei waa iibiyaha telefoonka gacanta ugu weyn. The blocks dowladda Shiinaha Android ee Store Play Google iyo qaybaha qaar ka mid ah iTunes Apple ee, yareysey helidda apps sida BTC.com ee. Iyadoo Shiinaha ayaa hoos u xidhay dhufto ee ganacsiga cryptocurrency, dadka weli yeelan karaan lacagaha dalwaddii.
"Waa fursad wanaagsan oo ka jaftaa suuqa Chinese,"De la Torre ayaa sheegay in mar wareysi dhinaca taleefanka. "Isticmaalka lacagta listicmaalka la apps waa mid aad u weyn iyo nidaamka bangiyada dhaqanka dhiman, sidaa darteed waxaa jira xaalad isticmaalka wanaagsan ee lacagta crypto oo ay halkaas u koraan. "
gacanta fintech ee G ...
Dawladda ayaa qorshaynaysa in ay Korean ...
Post Previous:Axe Trading for Cryptotrading
Post Next:Crypto dhalinyarada